(L) အချို့သောသူများသည်အပြန်အလှန်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းကိုအခြားသူများထက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ ခံယူကြသနည်း (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
(L) အဘယ်ကြောင့်လူတချို့ဆက်ဆံရေးအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းသည် သာ. ကောင်း၏သန်းအခြားသူများ (2011) ကိုတှနျးလှနျ
မှတ်ချက်များ - ဤစာတမ်း၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာ“ အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ” သည်ဖောက်ပြန်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အလမ်းများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသစ်သောမိတ်ဖက်တစ် ဦး သည်လိင်ဆက်ဆံလိုသည့်ဆန္ဒ (dopamine) သည်ညစ်ညမ်းမှုကဲ့သို့အလိုဆန္ဒ၏တူညီသောအာရုံကြောဆိုင်ရာ circuit များ (reward circuitry) ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခုခံနိုင်စွမ်း (အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်မှု) သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုခုခံတွန်းလှန်သည့် frontal cortex ဆားကစ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအလုပ်အမှုဆောင်တိုက်နယ်များ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနိမ့်ကျမှုသည်အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းခြင်း၏ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ Hypofrontality သည်ဤ willpower circuit များအလုပ်နှင့်မကိုက်ညီသောအခါဖြစ်သည်။
အပိုဒ်: အဘယ်ကြောင့်လူတချို့ဆက်ဆံရေးအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းသည် သာ. ကောင်း၏သန်းအခြားသူများကိုတှနျးလှနျ
သင်ဟာချစ်ခင်တွယ်တာမှုရှိပြီးသစ္စာရှိရှိချစ်ခင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ သို့သော်အလှည့်တိုင်းတွင်သွေးဆောင်မှုရှိသည်။ ကုန်စုံစတိုးဆိုင်တွင်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းရှိချစ်စရာကောင်းသောသူသည်မျက်ခုံးကြီးဖြင့်သင့်ကိုပြုံးနေသည်။ မင်းကပရောပရည်စကားပြောနေတာကိုစတင်လိုက်ပြီး၊ ဒီလူကမင်းရဲ့နံပါတ်တောင်းတယ်။ သင်ဘာလုပ်ပါသလဲ? မင်းဘာလို့လိမ်တာလဲ ဘာတွေရပ်တန့်နေတာလဲ
ဤကဲ့သို့သောအချိန်များ၌သင်၏အူလမ်းကြောင်းဗီဇ (ယခုသူနှင့်လိင်ဆက်ဆံပါ!) နှင့်သင်၏ရေရှည်ရည်မှန်းချက် (သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားသစ္စာရှိပါ!) အကြားပconflictိပက္ခဖြစ်သည်။ သူ့ဟာသူအူလမ်းကြောင်းဗီဇရှိခြင်းသေချာပေါက်မမှားပါ။ ဒါဟာသင်ဟာလူသားတစ် ဦး ရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာပဲ။ များသောအားဖြင့်လူတိုင်းသည်တစ်ကိုယ်ရေဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေလှပသောလူများကိုအလိုအလျောက်ဆွဲဆောင်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောသူနှင့်တွေ့သောအခါလူများ၏ချဉ်းကပ်မှုသည်အလိုအလျောက်သက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောသူ၏မျက်စိကိုကြာကြာကြည့်လေ့ရှိသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုနှင့်မည်သည့်ထိန်းချုပ်မှုမျှမပါဘဲဖြစ်လာသည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလူတစ် ဦး နှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုအကျိုးပြုသည်၊
ဒီသဘောထားတွေဟာဘယ်လောက်အထိ၊ အလိုအလျောက်၊ အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါလူတိုင်းကဘာကြောင့်မလိမ်တာလဲ။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကလူတိုင်းကလိမ်တာမဟုတ်ဘဲအချို့သောလူများသည်ဤသွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ရန်အခြားသူများထက်အဘယ်ကြောင့်ပိုကောင်းသည်ဟုမေးခွန်းထုတ်စေသည်။
မကြာမီကသုတေသနအဖြေကိုမှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါ default အနေနဲ့ပြည်နယ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့အပေါ်ပြုမူရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခိုင်ခံ့စိတ်ခံစားမှု၎င်းအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုလိုအပ်တယ်, သင်ရှိသည်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုအခြားနည်းလမ်း (က Tiger Woods ကိုလက်ခံရရှိသူအပေါင်းတို့ကိုကမ်းလှမ်းမှုစိတ်ကူး), အခက်ခဲကြောင့်သင့်ရဲ့ Impulses သတင်းပို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပညာရှင်များသည်မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းခြင်းဖြစ်စဉ်များကိုအထောက်အကူပြုသောလူများ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိသောအမြှေး (ဦး နဖူးပတ် ၀ န်းကျင်) တွင် ဦး နှောက်areasရိယာအချို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်တွင်တိုးတက်ရန်နောက်ဆုံးစီမံချက်ဖြစ်သည့်“ အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ” သည်စီမံရန်၊ တားဆီးရန်သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ရန်နှောင့်နှေးစေခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်အလုပ်တစ်ခုကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးအာရုံပျံ့လွင့်စေခြင်းကိုလျစ်လျူရှုသည့်အခါတိုင်း၊ ဦး နှောက်၏ဤအပိုင်းများကမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိထွန်းလင်းတောက်ပသည်ဆိုသည်မှာလူများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်၊ များပြားလှသောသွေးဆောင်မှုများကိုတွန်းလှန်ပြီးအန္တရာယ်ရှိသည့်အပြုအမူများနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းတို့အပါအ ၀ င်အရေးကြီးသောရလဒ်များကိုခန့်မှန်းသည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုမှအစာစားချိန်တွင် M & Ms စားရန်တိုက်တွန်းခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စွမ်းအားကိုပင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။
ထို့ကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုသည်လှည့်စားခြင်းအပြုအမူများတွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သင်၏ရေရှည်ရည်မှန်းချက်မှာသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်သစ္စာရှိရန်နှင့်သင်သည်သွေးဆောင်မှုများစွာရရှိပါက၎င်းသည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုများစွာလိုအပ်သည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုသည်လူများအားဆွဲဆောင်မှုရှိသောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမိတ်ဖက်များ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုတွေ့ကြုံရနိုင်သောအခြေအနေများအား ဦး စွာရှောင်ရှားရန်လည်းကူညီနိုင်သည်။
မကြာသေးမီကအထောက်အထားများအအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို cheat နှင့်အတူလုပ်ဖို့တွေအများကြီးရှိသည်ပြုပါကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဆီမှ Ritter နှင့် Radboud တက္ကသိုလ် Nijmegen မှာသူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်, Romantic ပါဝင်ပတ်သက်လိင်ကွဲတစ်ဦးချင်းစီတစ်ခုတည်းဖြစ်နှင့်သောသူတို့ထက်ဆွဲဆောင်မှုဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လျော့နည်းအကျိုးစီးပွားအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့သိမြင်ထိုကဲ့သို့သောပေးထားသောတစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာအချိန်ဖိအားအဖြစ်စမ်းသပ်နေဖြင့်အခွန်ကောက်သောအခါအားလုံးသည်ကစားနည်းသျောပယ်ခဲ့ကြသည်။ ဤအခွအေနမြေားတှငျ, ဆင်းသူတို့ရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်-ထိန်းချုပ်မှုကိုယ်ရံတော်အတူတစ်ခုတည်းနှင့် Romantic ပါဝင်ပတ်သက်တစ်ဦးချင်းစီအကြားခြားနားချက်မရှိတော့အဲဒီမှာပဲ! ဒါဟာသူတို့အလုံအလောက်သိမြင်အရင်းအမြစ်များနှင့်သတိရှိရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အချိန်ရှိသည်အခါ, Romantic ပါဝင်ပတ်သက်လူတွေသာဆွဲဆောင်မှုအလားအလာမိတ်ဖက်ပယ်ချကြောင်း, ထို့နောက်ပုံပေါ်ပါတယ်။
ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်လူမှုစိတ်ပညာဆိုင်ရာဂျာနယ်ရှိသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ Tila Pronk နှင့် Radboud တက္ကသိုလ် Nijmegen မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အချို့သူများသည်တည်ကြည်ခြင်း၌အခြားသူများထက် ပို၍ အခက်အခဲပိုများရသည့်အကြောင်းရင်းကိုသိပ္ပံနည်းကျစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ပြissueနာကိုပိုမိုတိုက်ရိုက်လေ့လာခဲ့သည် သူတို့ရဲ့ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်။ လေ့လာမှု (၃) ခုအနက်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လူတို့၏သစ္စာစောင့်သိနိုင်စွမ်းတို့အကြားဆက်စပ်မှုကိုသူတို့စုံစမ်းခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးလေ့လာမှုတွင်အချစ်ဇာတ်လမ်းပါ ၀ င်သောကျောင်းသား ၇၂ ဦး သည်ညွှန်ကြားချက်နှစ်ခုနှင့်မေးခွန်းပုံစံအကြားအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကိုတိုင်းတာသည့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအလုပ်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်စေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်မည်မျှကောင်းမွန်စွာတည်ရှိနေသည်ကိုမေးမြန်းသည့်ဥပမာ (ဥပမာ - အကယ်၍ ချစ်စရာကောင်းလျှင်၊ မိန်းကလေးကငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ငါသွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ဖို့အခက်တွေ့တယ်”) ။ အုပ်ချုပ်မှုအောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိသူများသည်သစ္စာစောင့်သိရန်အခက်အခဲပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျား၊ မကွဲပြားမှုမရှိပါ။
သူတို့ရဲ့ဒုတိယလေ့လာမှုမှာ, သူတို့ကသာယောက်ျားများ၏နမူနာအတွက်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအပြုအမူတွေကိုကြည့်ရှု။ နှစ်ဆယ်နှစ်လိင်ကွဲယောက်ျားတစ်ပြိုင်နက်သတင်းအချက်အလက်လုပ်ဆောင်နေစဉ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်အက္ခရာများကိုစောင့်ရှောက်ရန်စွမ်းရည်လိုအပ်ကြောင်းအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတာဝန်ပြီးစီး။ ဤသည်တာဝန်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များအခွန်ပေးသောမှတ်ဉာဏ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်မွမ်းမံ, လိုအပ်သည်။ task ကိုဖြည့်ပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုစမ်းသပ်သူတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်အထိစောင့်ဆိုင်းခန်းထဲမှာထိုင်ခိုင်းတယ်။
ထို့နောက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး လမ်းလျှောက်လာခဲ့သည်။ စမ်းသပ်သူများမှထိုအမျိုးသမီးကိုဖော်ရွေမှုရှိသော်လည်းစိတ် ၀ င်စားမှုကင်းစွာပြုမူရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများသည်စမ်းသပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှသတိမထားမိကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးနောက်တွင်အမျိုးသမီးများနှင့်လွတ်လပ်သောလေ့လာသူလေး ဦး ကိုပထမငါးမိနစ်အတွင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ လေ့လာသူများအားလုံးသည်မြင်တွေ့ခဲ့ရာကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အလွန်အမင်းသဘောတူခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးလေ့လာမှုနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတာကအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအဆင့်နိမ့်လေ၊
သူတို့ရဲ့တတိယလေ့လာမှုမှာတော့သူတို့အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုအခြားရွေးချယ်စရာအတူအခြေအနေမှာတက်အဆုံးသတ်မှလူများကိုတားဆီးကူညီပေးသည်ရှိမရှိကြည့်ရှု။ ခြောက်ဆယ့်ငါးယောက်ျားမိန်းမတို့ကြောင်းစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလျစ်လျူရှုနေချိန်တွင်သူတို့တစ်တွေစကားလုံးများ၏အရောင်အမည်ကိုခဲ့သည့်အတွက်ကျော်ကြား Stroop Test ကို, ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးစားပြီး: ဒီတစ်ခုလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ!
စီမံခန့်ခွဲမှုထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာကိုယူပြီးသည့်နောက်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားကျပန်းတာဝန်ပေးထားသည့်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး နှင့်“ အကျွမ်းတဝင်ဂိမ်းတစ်ခု” ကစားမည်ဟုပြောခဲ့သည်။ (ဥပမာ -“ မင်းနာမည်ကြီးလိုပါသလား?”) ။ သူတို့ကိုအခြားပါ ၀ င်ဆင်နွှဲသူတစ် ဦး ၏ပုံ (ပြသထားသောလိင်ခြားသူဖြစ်သည်။ ) ဂိမ်းအပြီး, သူတို့ကလုံးဝဆွဲဆောင်မှုမှလုံးဝဆွဲဆောင်မှုမနှစ်သက်သောအကြားတစ်နေရာရာမှာ slider ကိုရွှေ့ခြင်းနှင့်သူတို့အစစ်အမှန်ဘဝ၌အခြားပါဝင်သူတွေ့ဆုံရန်ချင်ပါတယ်အားဖြင့်သူတို့ကအခြားပါဝင်သူတွေ့ရှိခဲ့ဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်မှုဖော်ပြခဲ့တယ်။
အံ့အားသင့်စရာတော့မရှိတာကပါဝင်သူကသူကိုအခြားသူကိုဆွဲဆောင်လေလေသူနဲ့သူမတွေ့ဆုံချင်လေပဲ။ သို့သော်သူတို့၏ခန့်မှန်းချက်များနှင့်အညီအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုသည်အခြားဆွဲဆောင်မှုရှိသောအခြားသူနှင့်တွေ့ဆုံလိုသောဆန္ဒကိုလျော့နည်းစေပြီး၊ ယူဆရသည်မှာအကြောင်းတစ်ခုမှာလူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်သူတို့၏ဆန္ဒများသည်ဆက်ဆံရေးတွင်ရှိသူများကဲ့သို့အားကောင်းနေသော်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သိသောအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုရန်မလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမျိုးသားများကအခြားပါဝင်သူကိုအမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသားများကြားမှအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး (တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှု) သည်အခြားသူနှင့်တွေ့ဆုံလိုသည့်ဆန္ဒကိုဖော်ပြနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ? အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုဟာဘာကြောင့်အရမ်းအရေးကြီးတာလဲ။ ဖြစ်နိုင်ခြေအနည်းငယ်ကိုသုတေသီများကအကြံပြုသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုသည်လူတိုင်းခံစားရသည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုတားဆီးပေးသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်တွန်းအားရှိခြင်းသည်အဆင်ပြေသော်လည်း၊ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုတားဆီးရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဥပမာပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်သွေးဆောင်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများသို့ရောက်ရှိခြင်း (ဥပမာ -“ ဆွဲထားခြင်း”) ။ ဒီတားစီးအားလုံးသည်ကန့်သတ်သိမြင်မှုအရင်းအမြစ်များလိုအပ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုရှိသောသူများသည်အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်များအကြောင်းပိုမိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်လှည့်စားခြင်းတို့အကြားအားကြီးသောဆက်နွယ်မှုကိုသုတေသနကပြသသည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုပိုမိုမြင့်မားသောသူတို့သည်စိတ်အာရုံပျံ့လွင့်မှုနည်းသွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါအားနည်းချက်ရှိနိုင်သည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုသည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေစဉ်အတွင်းပါတနာ၏ပုံရိပ်ကိုစိတ်ထဲစွဲမြဲစေရန်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုနိမ့်ကျသူများသည်ဤပုံရိပ်ကိုစိတ်ထဲထားရန်အခက်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်စုံစမ်းနှောင့်ယှက်မှုကိုလက်လျှော့ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုအပြည့်အဝမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ မတူညီသောအုပ်ချုပ်မှုအဆင့်ရှိအဆင့်ရှိသူများအနေဖြင့်ဆက်ဆံရေးရှိသည့်သူများသည်အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါကွဲပြားခြားနားသောသွေးဆောင်မှုကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ဤဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးသည်နောက်ထပ်သုတေသနပြုရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီ။
ဒီသုတေသန၏သက်ရောက်မှုကြီးမားဖြစ်ကြသည်။ မှတ်ဉာဏ် (သို့) အမည်အရောင်များရှိအက္ခရာများကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်နိုင်သမျှမြန်ဆန်စွာခိုးချရန်သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းရှိသကဲ့သို့သိမြင်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့သောအရာတစ်ခုခုသည်မည်သူထင်လိမ့်မည်နည်း။ ဤလေ့လာမှုကကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ရှိအခြားအရာများနှင့်မည်မျှဆက်စပ်နေသည်ကိုပြသည်။ လူတို့၏သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုလျော့ချလိုက်သောအခါ၎င်းတို့သည်ဖောက်ပြန်မှုကိုပိုမိုအားနည်းလာသည်။
အလုပ်များစွာသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများအပါအ ၀ င်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကိုအခြေအနေများစွာကထိခိုက်စေနိုင်သည်။ သုတေသနများအရလူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်သောကရောက်မှုများမြင့်တက်လာသောအခါလူတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းကို ပို၍ ပြုလေ့ရှိကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများသောအလုပ်များသည့်နာမည်ကြီးသောအနုပညာရှင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်ဖောက်ပြန်မှုအတွက်ပုံသေနည်းဖြစ်သည်။ ဒါကဘယ်သူ့ကိုမှခွင့်လွှတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကိုအနည်းငယ်ထပ်ဖြည့်သည်။
ရောနှောဖို့အရက် Add နှင့်အကြောင်းကိုမေ့လျော့။ အရက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအားနည်းသွားပြခဲ့ပြီးလည်း (ပြီးသားအုပ်စုတစုအဖြစ်နှင့်အတူစတင်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ရှိသည်သောသူ) ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားဖောက်ပြန်နှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။
ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရား? လှည့်စားရန်သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ရန်သိမှုအားထုတ်မှုလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ မင်းမှာအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ရင်မင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုလိမ်ညာမှုနည်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။ သင့်မှာသိမြင်မှုအရင်းအမြစ်တွေအများကြီးမရှိဘဲနဲ့သင့်လက်တွဲဖော်ကိုသစ္စာရှိရှိလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ မူးယစ်မှုတွေအောက်မှာမင်းဟာဆွဲဆောင်မှုရှိသူ၊ ကြွယ်ဝသူ၊ ကျော်ကြားသူမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ထိုသေတ္တာများအားလုံးတစ်ချိန်တည်းမစစ်ဆေးပါနှင့်ဟုဆုတောင်းပါ။ သို့မဟုတ်သင်မူကား၊
ယခုတွင်သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်လောင်းကိုသူမလှည့်စားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိသိလိုလျှင်၎င်းအား ol 'Stroop Test ကိုပေးပါ။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးရက်စွဲတွင်သင်သည်ထိုသို့မပြုလုပ်ရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါကသူတို့သည်သင့်အားလိမ်လည်လှည့်ဖြားရန်လိုလိမ့်မည်။